manawphyulay's Page - Myanmar in Singapore
Share Blog Posts (43)Discussions (18)Events in SingaporeGroups (5)Photos (13)Photo AlbumsVideos manawphyulay's Likes Manawphyulay's Friends
Started this discussion. Last reply by moe pwint Oct 1, 2011.3Replies
စင်ကာပူရောက် မြန်မာများရဲ့ အတွေ့အကြုံ အခြေအနေများကို အားလုံး ပြန်လည်မျှဝေစေချင်ပါတယ်ရှင်။အလုပ်အကိုင်၊ အနေအထိုင်၊ စားသောက်မှုအတွေ့အကြုံလေးများနဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို နိုင်ငံခြားသို့…Continue View All
From ah nge lae
manawphyulay posted blog postsမန်နေဂျာလား… ဟောက်ဆာဂျင်လား…၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ခေတ်စားလာမည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများDec 20, 2012Michael commented on manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲ"U are completely Right Mr.Moon.Logical"Nov 4, 2012moe pwint liked manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲNov 4, 2012Yuko Ishida liked manawphyulay's blog post ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာအချက်တွေ လိုအပ်သလဲOct 3, 2012Claire Mon and manawphyulay are now friendsOct 3, 2012othanaye commented on manawphyulay's blog post ပြောင်းလဲခြင်း သဘောတရား"ရက်စက်လိုက်တာကောင်မလေးရယ်"Oct 2, 2012Snow Queen liked manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲSep 29, 2012Claire Mon leftacomment for manawphyulay"@MaNawPhyuLay:
Thanks for adding me asafriend in this website. I will take your comment asagood compliment.. "Sep 28, 2012manawphyulay postedablog postခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာအချက်တွေ လိုအပ်သလဲခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အနိမ့်ဆုံး၊ အကြမ်းဖျဉ်း လိုအပ်ချက်များပင် ဖြစ်ပါသည်။၁။ ကိုယ့်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရမည်။၂။ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ရမည်။၃။ နိုးကြား တက်ကြွရမည်။၄။ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရမည်။၅။ စိတ်စေတနာကောင်း ထားရှိရမည်။၆။ သတ္တိရှိရမည်။၇။ ဇွဲကောင်းရမည်။၈။ သစ္စာရှိရမည်။၉။ အမြင်ကျယ်ရမည်။၁၀။ သည်းခံနိုင်ရမည်။၁၁။ အနစ်နာခံနိုင်ရမည်။၁၂။ ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။၁၃။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ရမည်။၁၄။ အများ၏ ချစ်ခင်လေးစားမှုကို ခံယူရရှိသူ…See MoreSep 28, 2012 0
Claire Mon commented on manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲ"Just to let you know, there are more than thousands of people working professionally in Singapore without the skills of pampering...If you are really good at what you are doing, you won't need that pampering skills, you choose what you want to…"Sep 28, 2012၀တ်မှုန် leftacomment for manawphyulay"ဦးဇော်တို့ အင်တာနက်မှာ မနောဖြူရေးတဲ့ စာတွေ ရသ (သို့မဟုတ်) ဗဟုသုတ အခန်းမှာ တင်ချင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုမယ်ထင်ပါတယ်..http://murann.com"Sep 26, 2012၀တ်မှုန် commented on manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲ"အလွန်ကောင်းတဲ့ လူသားအရင်းမြစ် ဆောင်းပါးတိုလေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ Skill တွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံး Skill ရှိတဲ့သူပဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကျန်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါ ဘာ Skill ဆိုတော့ သင်တန်း တက်စရာ မလိုတဲ့ ဖားSkillက အမြင့်ဆုံး နေရာ ယူနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ...…"Sep 26, 2012yon ko san commented on manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲ"လစာနည်းပြီး အရမ်းအားနေတဲ့အလုပ်တွေမှာလဲ တော်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမမြဲကြပါဘူး။ တော်တဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို လိုချင်သလို လစာကောင်းကိုလဲ လိုချင်ကြပါတယ်။ လစာလဲ ဘာမှမရ...လုပ်စရာလဲ ဘာမှမရှိ...လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံကောင်းလဲ မရနိုင်တဲ့နေရာမှာ…"Sep 26, 2012May Kyaw liked manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲSep 23, 2012nannhsuhsunyunt commented on manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲ"အင်း.........အားလုံးအမှန်တွေကြီးပါပဲလေ....။
"Sep 22, 2012Naing Htut liked manawphyulay's blog post ပြောင်းလဲခြင်း သဘောတရားSep 22, 2012 More... RSS
၀က်ဘ်ဆိုက်တွေ နောက် ဘလော့ဂ်ရေးတာတွေ နည်းပညာ ရှယ်ရာ လုပ်တာတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
Posted on December 20, 2012 at 8:37pm0Comments
Continue ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ခေတ်စားလာမည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
Posted on December 20, 2012 at 8:34pm0Comments
အရင်တုန်းကတော့ ဒီလိုအလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှုမျိုးကို သင် သတိထားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဟိုတယ်အတော်များများ ဈေးကွက်အတွင်း အလုအယက်… Continue ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာအချက်တွေ လိုအပ်သလဲ
Posted on September 28, 2012 at 1:51pm0Comments
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အနိမ့်ဆုံး၊ အကြမ်းဖျဉ်း လိုအပ်ချက်များပင် ဖြစ်ပါသည်။၁။ ကိုယ့်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရမည်။၂။ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ရမည်။၃။ နိုးကြား တက်ကြွရမည်။၄။ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရမည်။၅။ စိတ်စေတနာကောင်း ထားရှိရမည်။၆။ သတ္တိရှိရမည်။၇။ ဇွဲကောင်းရမည်။၈။ သစ္စာရှိရမည်။၉။ အမြင်ကျယ်ရမည်။၁၀။ သည်းခံနိုင်ရမည်။၁၁။ အနစ်နာခံနိုင်ရမည်။၁၂။ ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။၁၃။… Continue ပြောင်းလဲခြင်း သဘောတရား
Posted on September 20, 2012 at 6:18pm 1 Comment
လောကမှ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ပြောင်းလဲမှု မြန်ဆန်ပုံလေးပေါ့။ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။ သူဟာ လူတွေအားလုံးကို မုန်းနေတယ်။ နောက်ဆုံး သူ့ကိုယ်သူလည်း မုန်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ မျက်မမြင်လေးတစ်ယောက်မို့လို့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူမ မုန်းတဲ့ထဲမှာ မပါဝင်တာကတော့ သူမရဲ့ချစ်သူ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ သူ့ချစ်သူဟာ သူ့နားမှာ အမြဲတမ်းနေပေးတယ်လေ။ တစ်နေ့တော့ သူ့ချစ်သူကို ပြောတယ်။ သူသာ ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို မြင်ရရင် ရှင့်ကို လက်ထပ်ပါမယ်လို့… Continue AddaBlog Post
At 2:08pm on September 28, 2012, Claire Mon said… @MaNawPhyuLay:
Thanks for adding me asafriend in this website. I will take your comment asagood compliment.. At 9:39pm on September 26, 2012, ၀တ်မှုန် said… ဦးဇော်တို့ အင်တာနက်မှာ မနောဖြူရေးတဲ့ စာတွေ ရသ (သို့မဟုတ်) ဗဟုသုတ အခန်းမှာ တင်ချင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုမယ်ထင်ပါတယ်..http://murann.com At 7:52pm on June 11, 2011, phone myint said… လာလည်သွားပါတယ် At 7:01pm on June 06, 2011, ah nge lae gave manawphyulayagift…ပုသိမ်ထီးဟိုင်း မနော်ဖြူလေး၊ကျွန်တော်ကစိုးသူရငြိမ်း ပါ၊ ကျွန်တော်လည်းဆည်းဆာအရိပ်မှာလှူဖူးပါတယ်၊ နောက်ထပ်လည်းအလှူငွေရအောင် free show လေးစီစဉ်နေပါတယ်၊G-talk ကောfbမှာပါနာမည်ကahngelae@gmail.comတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်
3. အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား၏ မယ်မြ
5. " ဆီး (ဇီး) သီး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ"
7. ခြောက်ပြစ်ကင်း လူသားများနှင့်နိုင်ငံ့အရေး
8. “လေထဲတွင်လွင့်ပျံ့ ခဲ့သော လွင့်ပျံ့နေဆဲဖြစ်သော”
9. ယောက်ျား-မိန်းမ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ နိယာမသဘောတရား (အပိုင်း- ၂)
10. ဆိုကရေးတီးသာရှိခဲ့လျင် သူ နှင့် သူ၏ဖေ့ဘွတ်မိတ်ဆွေ အင်တာဗျုး
11. လိုတာပေး၏ မပေး၏ လိုတာရ၏မရ၏
13. အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသင့်တဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်လား!
15. ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ statement တွေထုတ်၊ သဘောထားတွေကြော်ငြာနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့ စီးတွေဆီကနေ အဲဒီစာရွက်တွေတောင်းပြီး ဒန်အိုးဒန်ခွက်နဲ့ လဲရင်အတော် အသုံးဝင်မယ်.. အမေရိကား၊ဂျပန်၊စင်ကာပူ..စတဲ့နိုင်ငံမှာ…